Audi A4 A5 A6 Q5 4H0959126A အတွက် OEM AC ဖိအားခလုတ်အာရုံခံကိရိယာ – Professional ကအလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံ|ကားအပိုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးထောက်ပံ့
Audi A4 A5 A6 Q5 4H0959126A အတွက် OEM AC ဖိအားခလုတ်အာရုံခံကိရိယာ
They're pressure transducers that convert refrigerant pressure toavariable voltage signal, somewhere between 0.1 V for low pressure (~0 psig) နှင့် 4.9 V for high pressure (~430 psig). On some vehicles these sensors are located on both sides of the system. Useaknown good manifold and gauge set andascan tool to diagnose sensor function. Armed withascan toolatechnician can monitor system refrigerant pressure withoutamanifold and gauge set.
ပစ္စည်း A/C Pressure Switch
1.OEM ထုတ်လုပ်မှုကြိုဆိုပါတယ်: ထုတ်ကုန်, အထုပ် ...
2.သင်၏မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမည် 24 နာရီ.
4.ပို့ပြီးနောက်, we will track the products until you get the products. သင်ကုန်ပစ္စည်းတယ်တဲ့အခါ, please check them, and give meareply. If you have any questions any problem, please contact with us, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဖြေရှင်းနိုင်လမ်းကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်.
Except our own factory,We have built solid relationships with numbers of strong manufacturers, such as Dongfeng Engine, Wuxi Holset Turbo, Bosch China, စသည်တို့. So we can provideavarious range of auto parts.
Re. T / T, ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ,Paypal, MoneyGram ,and other payment which is available in Alibaba .com.
Re. ယေဘူယျအားဖြင့် , our goods will be packed in Neutral white or brown boxes. If you have any other packing request ,please contact us.
Re. T / T 30% as deposit to prepare the goods , နှင့် 70% as balance before shipping the goods. We will show you photo before we ship the goods.
39180-2Hyundai Accent Elantra Kia Forte Soul အတွက် B000 လက်ကိုင်အနေအထားအာရုံခံကိရိယာ 391802B000
OEM # 89467-33040 Toyota Camry အတွက်အထက် O2 အောက်စီဂျင်အာရုံခံကိရိယာ
OEM # 22204-22010 Toyota Lexus Scion အတွက်စစ်မှန်သော Mass Flow Meter MAF Sensor
28810-RPC-013 28810-RPC-003 Trans Accord မြန်နှုန်း Honda Accord Civic အတွက်
Knock အာရုံခံကိရိယာ 89615-20060 Toyota Celica ST20 # 3SGTE Rav4 SXA1 # MR2 SW20 3SGE အတွက်
95720-3Hyundai Kia အတွက် W100 4MS271H7C PDC ယာဉ်ရပ်နားသည့်အာရုံခံကိရိယာ
အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာရာထူးအာရုံခံ 198500-1071 89452-20130 Toyota Celica အတွက်